Amanqaku kaTom Treanor kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UTom Treanor
UTom Treanor liGosa eliyiNtloko leNtengiso kwiTreasure Data, apho aqhuba khona ulwazi malunga neshishini le-CDP lenkampani (iqonga ledatha yabathengi). UTom ufumene i-MBA kwiSikolo seShishini i-Wharton, kunye ne-Master of Arts kwizifundo zamanye amazwe kwiYunivesithi yasePennsylvania.
Amanyathelo ama-6 okufumana iQonga leDatha yaBathengi (i-CDP) yokuthenga nge-C-Suite yakho
NgoLwesibini, Novemba 10, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 UTom Treanor
Kungalula ukucinga ukuba ngeli xesha lixhalabisayo, ii-CxOs azikulungelanga ukwenza utyalo-mali olukhulu kwintengiso eqhutywa yidatha nakwinkampani. Kodwa ngelishwa, basenomdla, kwaye isenokuba kungenxa yokuba babelindele ukudodobala koqoqosho, kodwa ithemba lemivuzo yokuqonda injongo yabathengi kunye nokuziphatha kwakubaluleke kakhulu ukuba bangayihoyi. Abanye bakhawulezisa izicwangciso zabo zotshintsho lwedijithali, kunye nedatha yabathengi eyona nto iphambili kuyo